Oduu Keeniyaatii dhufe! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsOduu Keeniyaatii dhufe!
Oduu Keeniyaatii dhufe
Pirezedaantiin Keeniyaa, Uhuru Keeniyaataa Keeniyaatti Ambaasaaddera Itoophiyaa,Obbo Mallas Alam waan Itoophiyaa keessaa hatattamaan ibsa gahaa fi dhugaa akka kennuuf waajjira isaatti waamee jira. Ibsi kun bor kan eegamu yoo tahu, kan sobaa fi gowwoomsa qabu taanaan Keeniyaa keessaa akka baasu akeekkachiisee jira.
Komishinerri Komishinii Poolisii Federaalaa duraa,itti aanaan tika biyyoolessaa, Obbo Indaashaw Xaasoo fedhii isaan aangoo gad dhiisuuf xalayaa galfachuun dhagahame.Obbo Indaashaw erga muudamni kennamee guyyaa 4 duwwaa waajjira kan gale yoo tahu,yeroo ammaa waajjirri tikaa basaastota Eertiraan dhuunfatamuun barameera.
Filannoo fi Teedii Afroo
Boordiin Filannoo guyyaa galmee Kaadhimamtootaa dheeresse.
Guyyaan galmee kaadhimamtootaa hanga Guraandhala 21/2013tti ture Oromiyaa keessatti kaadhimamtootni galmaa’an waan hin jirreef guyyaa galmee dheeressuun hanga Guraandhala 25/2013 akka tahu ibse. Oromiyaa keessatti dhuunfaadhaan atileetotnii fi aartistootni akka dorgoman Abiy Ahmed kadhachaa jira. Isaan keessaa Atileet Daraartuu Tulluu, Qananiisaa Baqqalaa fi Teedii Afroo keessatti akka argaman Qeerroo Intelligence Group mirkaneeffateera. Jarreen kun hunduu akka kadhaa Abiy kuffiisanis mirkaneeffanneerra.